Tantaran'i Neal Maupay momba ny fahazazana sy ny zava-misy momba ny tantaram-piainan'i Untold
Home STARS EUROPEAN Tantaran'i Neal Maupay momba ny fahazazan-jaza ary Untold Biography Facts
Tantaran'i Neal Maupay momba ny fahazazan-jaza ary Untold Biography Facts. Sary: GetfootballNewsFrance sy TransferMarket
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "Neal". Ny tantara Neal Maupay Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy misandratra Neal Maupay. Credits sary: ​​OGCNice, GetFootballNewsFrance, SkySports ary TheSun
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fanabeazana / fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny laza, ny fitomboan-tantara, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pianakaviana, ny zava-misy amin'ny fiainam-pianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zava-misy kely fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa manana maso fatratra izy amin'ny tanjona baolina ary tsy isalasalana fa izy dia iray amin'ireo mpilalao lehibe manaraka amin'ny Football Football. Na izany aza, vitsy an'isa ihany no mihevitra ny dikan-tenantsika momba ny Biolojia Neal Maupay izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Zavam-pianakaviana sy fiainana taloha
Neal Maupay dia teraka tamin'ny andro faha-14 ny volana aogositra 1996 tamin'ny reny Arzantina ary raim-pianakaviana frantsay tao amin'ny departemanta frantsay ao Yvelines izay hita any amoron-dranon'i Paris, France.
Maupay dia avy amin'ny fianakaviany avy any amin'ny tanàna tsara tarehy Versailles izay eo amin'ny 17.1 km miala ao afovoan-tanànan'i Paris. Avy eo, ny fianakaviany dia nipetraka tao Versailles - iray amin'ireo tanàna manankarena indrindra ivelan'i Paris. Versailles dia tanàna fantatra amin'ny zaridaina notendren'ny UNESCO ho World Heritage Site. Ity ambany ity ny fomba fijery mahafinaritra an'ny tanàna iray Neal Maupay izay nanombohana azy tamin'ny fanetren-tena.
Neal Maupay Fiainana tany am-boalohany- Nandany ny taona 4 voalohany tao amin'ny tanàna nahaterahany, Versailles izay niavian'ny fianakaviany. Trosa: GardenVisit sy frenchmoments
Na dia teraka tany Frantsa aza i Neal Maupay dia manana fianakaviana Arzantina noho ny reniny izay nifindra tany Frantsa izay lasa vadin'ny dadan'i Neal Maupay. Raha ny renin'i Maupay no nikarakara ny tokatrano, ny dadany dia nanana ny fanolorantena nataony a asa fanompoana sivily izay nitana andraikitra ankolaka tamin'ny fahazazan'i Neal Maupay sy ny fitaizana baolina kitra.
Ny famindrana serivisy sivily dia zavatra iraisan'ny mpiasam-panjakana. Tamin'ny taona 2001, dia tonga tamin'ny vaovao ny dadany fa nafindra tao Versailles izy ho iray amin'ireo sampana miasa ao Côte d'Azur, faritra iray eo amin'ny fitantanan-draharaha any atsimo any Frantsa.
Ny fanapahan-kevitra ho an'ny fianakavian'i Maupay hifindra monina dia nino tamim-pinoana ary Neal kely (5 zokiny) niaraka tamin'ny ray aman-dreniny nifindra tamin'ny lalana 880.0 km mankany Côte d'Azur. Tao Côte d'Azur moa dia tsy nahatsiaro ireo nofinofiny tamin'ny baolina kitra ilay zazalahy kely.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fanabeazana sy fanabeazana
Tamin'ny taona 6 tamin'ny taona 2002 dia nahita ny fitiavany ilay zazalahy izay:Milalao baolina kitra". Ny fitiavam-bolan'ny baolina kitra voalohany nataon'i Neal dia nahita ny ray aman-dreniny nanoratra azy tao amin'ny fikambanana kely antsoina hoe Valbonne Sophia-Antipolis. Nanomboka fikatsahana voalohany hahazoana ny fampianarana baolina kitra tao izy nefa nahomby tamin'ny famoahana azy tamin'ny fianarana. Noho ny fanerena an-tsekoly tamin'izany fotoana izany, i Maupay irery dia afaka niara-nilalao tamina namana nandritra ny faran'ny herinandro.
Na eo aza ny fametrahana ny baolina kitra kely dia Valbonne Sophia-Antipolis nanana fifandraisany tsara niaraka tamin'ny anarana lehibe vitsivitsy tamin'ny baolina kitra frantsay. Ny klioba kely dia nahazo laza teo amin'ny famolavolana ireo mpianatra tsara indrindra nataony mba hiatrika fitsapana amin'i OGC Nice, mpifanolobodirindrina aminy akaiky indrindra. Satria i Neal Maupay Valbonne ny mpianatra tsara indrindra, OGC Nice dia nahasarika azy. Nanao ny zavatra rehetra ilaina ny fikambanana mba hampidirany azy ao amin'ny efitrano fianarany.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Tamin'ny taona 2007, ny fahaiza-manaon'i Neal Maupay dia nahita ny fitantanana OGC Nice maka kilaometatra fanampiny. Nankany amin'ny tranon'ny fianakavian'i Maupay ny mpanamory fikambanana mba handresy lahatra ny ray aman-dreniny hamela ny zanany lahy hiaraka aminy. Nanaiky ny dadany sy ny maman'i Neal Maupay ary nifindra tany Nice, zanany lahy 30 minitra vitsy tao amin'ny klioba XNUMX, ny zanany lahy prodigy tanora.
Tao amin'ny Nice dia nanomboka nilalao teo aloha i Maupay noho ny atidohan'ny baolina kitra matotra. Na dia tsy mpilalao lehibe sy matanjaka indrindra aza izy dia nahazo laza ho azy hatrany amin'ny toerana mety sy amin'ny fotoana mety.
Ho an'ny mahery fo, nanompo sampy i Maupay Luis Suarez izay nisy tamin'izany dia superstar niaraka tamin'i Ajax. Nataony mody ny lalao nilalao teo an-kianja, seho izay nahatonga azy tsy hijoro amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Akademia. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahatsapa tamin'i Neal sambatra fa ho mpilalao baolina mahomby izy.
Nahatsiaro ho mahazo aina tokoa i Neal Maupay ho an'ny OGC Nice. Sary: NiceMatin
Neal Maupay dia nitombo ary nitombo tamin'ny taonany 5 tao amin'ny Akademia tanora OGC Nice. Raha vao nanodina ny 16 izy dia avy hatrany dia nanao ny sonia ho any amin'ny ekipany voalohany. Ny antso tamin'ny zazavavin'i Maupay hiditra ao amin'ny ekipa voalohany Nice dia ekipa ho voninahitra satria ny nahita azy no nandrakotra ny zava-bita ho lasa mpilalao tanora faratampony ho lasa mpilalao ekipa tanora indrindra OGC Nice 1st.
Taorian'ny niantsoany dia nanao zava-bita hafa indray i MNNXX taona, tao anatin'ny fotoana fohy. Izy dia lasa 16nd zandriny indrindra amin'ny mpilalao amin'ny Ligue 2.
Neal Maupay dia nahitam-bokatra nahomby tamin'ny ekipa zokiolona Nice. bola: FranceFootball
Tahaka ny nitiavany azy ny zava-drehetra, dia nahalala an'izany ny kintana frantsay misandratra andro maizina tonga tokoa izy ary voaisa ny androny niaraka tamin'ny OGC Nice.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Road to Fame
Ny fahalavoana tsy nampoizina: Tamin'ny voalohany, nanomboka tsara ny zava-drehetra niaraka tamin'i Neal Maupay taorian'ny fianjany tao amin'ny ekipa voalohany sokajy. Nandeha tsara ny raharaha mandra ny ratra tamin'ny hazo fijaliana lehibe dia nanala azy tamin'ny firehetan'ny fitiavany baolina.
Rehefa niverina avy naratra i Maupay dia nifanena tamin'ny fihetsiky ny lehibeny Claude Puel. Taitra be izy nahita ny tenany lasa tsy nankasitrahan'ny lehilahy iray, herinandro lasa izay.
Neal Maupay tampoka teo noho ny fitiavan'i Claude Puel. Sary: Ligue1
Nanomboka nisy fiantraikany tamin'ny asany ny hetsika nataon'i Claude Puel, ka nanova ny fomba fisainany momba ny ho aviny amin'ny klioba izany. Ny "Zanaky ny Nice”Araka ny niantsoana azy matetika hoe very ny faharetany taorian'ny fialan-tsasatra. Nanao safidy izy nandao ny OGC Nice tamin'ny Aogositra 2015.
Tamin'ny 10 Aogositra 2015 dia nifindra tany Saint-Étienne i Maupay. Herinandro vitsivitsy taorian'ny niarahan'izy ireo dia nanomboka nanao fahatsapana lehibe tamin'ny fikambanana izy. Ny fampisehoany azy tany Saint-Étienne dia midika fa nandray fanapahan-kevitra mety handao ny OGC Nice. Fantatrao ve?… Ny fahaizan'i Neal Maupay amin'ny fahaizan'ny mpamaky baolina miaraka amin'i Saint-Étienne dia nahita azy niantso ny antoko U19 frantsay.
Na dia nanana fiantombohana tsara tamin'i Saint-Etienne aza, mbola nahatsapa ny tokony hilalao tany Angletera i Neal Maupay. Credit: Instagram
Fanaovana ny paikady anglisy: Rehefa nantsoina tamin'ny ekipa frantsay U19 frantsay dia nahita Maupay feno fatra-pitady tohatra hihanika tohatra amin'ny tohatra. Tamin'ity indray mitoraka ity, nanomboka nanaparitaka ny hoaviny izy. Tsy nanam-potoana firy talohan'ny nanombohan'ny tanora tsy liana tamin'ny baolina kitra frantsay. Tampoka teo, namolavola ny filan'ny filalaovana izy ny Ligy Premier.
Maupay dia namorona paikady hahitany azy hizaha toetra ny fizahana anglisy. Natoky ny fahaizany mampiasa platform anglisy Ligue 2 toy izany izy mba hahatratrarana ny League1, ny Championship ary avy eo, ny ligy voalohany. Voalohany, nanaiky ny hizaha ny talentany i Neal Mapuay tamin'ny fampidirany ny klioba Ligue 2 anglisy Brest amin'ny trosa.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitsangàna mba ho ankizilahy
Tsy mora tamin'i Neal Maupay ny nametraka tany Angletera raha tsy nianatra ny fiteny anglisy. Raha niresaka ny zava-tsarotra sarotra hoy izy indray mandeha;
“Mbola tanora aho ary izao no fotoana voalohany nandaozako ny fireneko. TSY fantatro hoe ahoana ny fomba hitenenako anglisy. Tsy nahalala olona tao amin'ny klioba aho.
Tsy haiko na inona na inona momba ny baolina anglisy anglisy, na momba an'i Angletera. Tsy nankany London aho. tsy mora ny mandamina sy mahazo aina rehefa miaina miaraka amin'ny kolontsaina vaovao ianao. ”
Na dia teo aza ny sakantsakana fiteny, nanao betsaka i Maupay. Nanohy ny loka izy tamin'ny volana Aogositra 2016 UNFP Ligue 2 Player of the Month. Nahazo mpifaninana hafa toy ny Septambra, Oktobra ary Desambra 2016 mpilalao amin'ny loka loka. Taorian'io zava-bita io dia nanapa-kevitra i Neal fa hampidi-doza ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fikambanan'ny klioba Brentford izay nanao sonia azy amin'ny fotoana maharitra.
I Maupay dia nanomboka tsara tamin'i Brentford satria izy no lasa milina tanjona farany. Ny zava-bitany tamin'ny vanim-potoana 2018 / 2019 dia nahita azy nahazo loka an-tsehatra manaraka toy ny; (1) Ny mpilalao amboara Tompondakan'ny Tompondakan'ny FFA '2018 Aogositra an'ny 2), 2018) Ny 3 September EFL Championship Player amin'ny volana, (2018) Ny 2019 / 4 Brentford Mpanohana ny fifaninanana ho an'ny taona ary (2018) ilay 2019 / XNUMX Brentford Mpilalao mpilalao amin'ny loka.
Nankany amin'ny Ligy anglisy anglisy ny dian'i Neal Maupay. Sary: Twitter
Maupay dia nanambara ny zava-bitan'ny làlan'ny làlan'ny làlambe anglisy tamin'ny alàlan'ny fahazoany loka mendrika indrindra. Fantatrao ve?… Maupay nandresy ny London Football Awards (2018 / 2019 EFL Player amin'ny taona), manasaraka ny toerany amin'ny maha mpilalao lehibe manaraka ny baolina kitra frantsay. Araka ny nanantenan'ny mpankafy maro, ny fandresena ny mpilalao 2018 / 2019 EFL an'ny mari-pankasitrahana dia nitarika ny fiakarany haingana ho any amin'ny ligy voalohany.
Neal Maupay Mitsangàna amin'ny tantara tantara- Nankafy ny fivoahana fety izy avy amin'ny EFL. Sary: Twitter
Tonga tamin'ny 5 tamin'ny Aogositra 2019 ny XNUMX, nifindra tany amin'ny Premier League niaraka tamin'i Brighton & Hove Albion i Maupay. Mandritra ny fotoana nanoratana dia miaina finaritra ny mpilalao baolina kitra frantsay ary mahita ny nofinofinin'ny ligy voalohany azy. Niditra amina fotoana nandresena lalao maro indrindra izy ho an'ny Brighton izay tena manan-danja indrindra, nametraka ny toerany ao amin'ny ekipan'ny klioba.
Neal Maupay- Manana fiainana tsara miaraka amin'i Brighton. Sary: BBCFootball
Tsy isalasalana fa ny mpankafy baolina kitra dia mety ho any an-tsaha mahita tanora tanora frantsay iray mamelona ho talenta sokajy eran'izao tontolo izao eo imasonay. Ny ambiny, araka ny nambarany, dia tantara ankehitriny.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Relationship Life
Miaraka amin'ny fiakaran'ny lazany sy ny fiakaran'ny toerany anglisy, dia azo antoka fa ny mpankafy baolina kitra sasany dia tokony efa nisaintsaina hahalala bebe kokoa an'i Maupay, ohatra, raha manana sipa izy na vady. Tsy misy ny mandà ny zava-misy fa ny endriny mahafatifaty miaraka amin'ny fomba filalaovany dia tsy hametraka azy ho laharam-pahamehana iray amin'ny filan'ny sakaizan'ny filan'ny sipa.
Iza no sakaizan'i Neal Maupays? Sary: Twitter. Sary: Instagram
Taorian'ny fikarohana be amin'ny Internet, niseho tamin'ny fotoana nanoratana, Neal Maupay dia nanao ezaka mba tsy hampahafantatra ny sakaizany na ny vadiny (izany fa raha efa manambady izy). Angamba izy mety hoe i Neal dia mpitovo ary tsy misy WAG.
Ny ankamaroan'ny mpilalao baolina dia maniry ny hiaro ny vehivavy sakaizany amin'ny haino aman-jery satria ny baolina miteny anglisy dia tsy azo avela heloka indrindra fa raha tsy voahaja tsara ny raharaha momba ny asa sy ny fifandraisana. Ity dia mety ho i Neal Maupay.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana manokana
Ny fahafantaranao ny fiainam-piainan'i Neal Maupay dia hanampy amin'ny sary feno momba ny toetrany eny ambony kianja. Raha vao manomboka kosa dia tena manirery izy, olona iray izay nanaporofo fa afaka mifanaraka amin'ny kolontsaina anglisy. Maupay dia olona izay mahatsapa ny ilana irery mitokana ary manalavitra ny zavatra rehetra mba hamerenana ny hery rehefa mieritreritra ny hoaviny.
Neal Maupay Fiainana manokana. Ny trosa DailyMail
Lehilahy mahafinaritra izy izay tia maneho fanetren-tena nefa tsy misy tombokavatsa eo am-pisehon'ny lazan'ny baolina ankehitriny. Maupay dia sariaka ary manao izany TSY manana toetra maha-alpha lahy. Tsy masiaka loatra izy, matoky tena ary tsy miondrika. Maupay dia manolo-tena tanteraka hianatra ny teny Anglisy, hira iray izay nahita azy sambatra nandray azy Laptop laptop Apple Pro amin'ny adidy matihanina.
Fantatrao an'i Neal Maupay Fiainana manokana eny ambony eny. Sary nahazoan-tsary: ​​Instagram sy Twitter
Ny bebe kokoa amin'ny fiainany manokana dia manana olona matanjaka i Maupay, izay rehefa mikasa hanao zavatra izy, dia handeha hanatratra izany. Ohatra, nanapa-kevitra izy hanery ny tenany hijoro avy amin'ny liona ambany anglisy mankany amin'ny Ligy Premier na dia miatrika sakana amin'ny fiteny sy ny kolontsaina aza.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Lifestyle
Ny karama lehibe amin'ny fomba fiainan'ny mpilalao baolina kitra indrindra dia mifandraika amin'ny fomba fiaina mirentirenty mora ahita amin'ny tranobe be dia be, fiara lafo vidy ary famantarana hafa momba ny harena. Ny anay Neal Maupay manokana dia fanafody mamelombelona ho an'ny olona niavaka. Izahay dia manana porofo momba ny fomba fiainany tsotra. Ankehitriny, eo am-panaovana fiaran-dalamby lafo ny mpilalaon'ny mpilalao baolina kitra hafa, i Maupay dia matetika hita miaraka amin'ny karazan'entana tena izy - Ilay Scooter Vespa.
Fantatrao ny fomba fiaina Neal Maupay. Credits sary: tsy miankina ary Twitter
Neal Maupay dia manisy vola amin'ny karamany isan-kerinandro amin'ny fampiasana tsara. Mandritra ny fialantsasatra, ilay lehilahy Frantsay araka ny voalaza etsy ambony dia aleony mitsidika mahafinaritra ranomasina fitodiana. Amin'ny ankapobeny, ny fitondran-tenany sy ny fanapahan-keviny tsy an-kijanona no taratry ny tena amin'ny fomba ambany fanetren-tena.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Amin'ny fotoana fanoratana, ny fampahalalana, raha ny momba ny fianakavian'i Neal Maupay dia tsy voatanisa firy. Na izany aza, zavatra iray azo antoka. Vitan'ny fahombiazana ny lehilahy Frantsay manana ny fianakavian'ny Arzantina dia nandrafitra ny anjarany manokana ho an'ny fahaleovan-tena ara-bola, noho ny fanapahan-keviny ho lasa mpilalao baolina kitra.
Neal Maupay koa tamin'ny fotoana nanoratana dia niaro ny reniny, ny dadany ary ny rahavaviny tsy ho tratran'ny fampahalalam-baovao frantsay sy anglisy. Mety mahazo fiainana tsara any Frantsa angamba izy ireo ary indraindray tonga mitsidika azy any Angletera. Izahay dia matoky fa hanome fotoana amin'ny dinidinika amin'ny fianakaviana britanika izy tsy ho ela. Izao fotsiny no ifantohan'ny Neal Maupay baolina kitra.
Tantara Neal Maupay sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Untold Facts
Ny lafiny hafa aminy: Na dia mety tsy ho lava sy lehibe izy NEFA Tsy tokony hieritreritra ny hiady i Maupay raha tonga ny filàna, indrindra fa ny tanora mpiaro Brandon Williams izay efa nijoro teo amin'ny nalehany.
Brandon Williams sy Neal Maupay- Ireo mpilalao roa tsy misy dikany. Sary: DailyMail
Ny Idola 3 azy: Maupay dia karazana mpilalao iray izay mankasitraka tsy Luis Suarez. Ny lehilahy frantsay dia mametraka ny sainy amin'ny taranja baolina kitra roa koa dia; Sergio Aguero, ary Zinedine Zidane. ny tenany
“Miezaka ny aingam-panahy avy amin'izy rehetra aho. Mpilalao matanjaka i Aguero sy Suarez na dia misy aza ny habeny. Tsy izy ireo no lehibe indrindra na matanjaka indrindra fa tsy mamela na inona na inona ho eny an-kianja izy ireo. dia eo amin'ny toerana mety izy ireo amin'ny fotoana mety.
Zatra mikarakara ny baolina toa an'i Zidane koa aho. Tiako ny milalao malalaka na tahaka ny laharana 10, fa ny toerana tiako indrindra dia ny hitokona ”.
fivavahana: Maupay dia karazana mpanao baolina izay hita maso mafy manondro ny rantsan-tanan'ny lanitra dia hisaotra an'Andriamanitra rehefa avy namoaka tanjona. Raha jerena eto ambany dia tsy manana olana amin'ny fanehoana ny finoany ara-pinoana kristiana izy.
Neal Maupay dia nanondro ny rantsantanany ho any an-danitra aorian'ny lalao azony - Famantarana ny finoana ara-pivavahana. Credits: Ligy Premier, brightonandhoveind dependant
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny anay Neal Maupay Tantara momba ny fahazazan'ny zaza sy ny zavamisy. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Brighton sy Hove Albion Football Diary
Frantsay Moussa Dembele Childhood Tantara Untold Biography Facts
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy momba ny Fakta
Ny tantaran'i Issa Diop Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana
vannyhenrico - Febroary 18, 2020
Febroary 16, 2020
Febroary 15, 2020
vannyhenrico - Febroary 18, 2020 0
vannyhenrico - Febroary 16, 2020 0
Antony Martial Childhood Story Plus Tsy azo atao Biography Facts
Aogositra 27, 2017
Samuel Umtiti ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tsy fantatra momba ny tantaram-pitiavana
Enga anie 25, 2018